matoorka hawada vane, qeexida matoorka pneumatic, 10 hp pneumatic motor
vane hawada, 10 hp faahfaahinta matoorka hawo-galeenka
Gawaarida Hawada - matoorrada hawada
Mashiinka hawada (pneumatic motor) ama matoorka hawo la cadaadiyey waa nooc ka mid ah matoorrada oo sameeya shaqo farsamo iyadoo balaarinaysa hawo cadaadis leh. Matoorrada hawadu waxay xiraan badbaadada, awoodda la isku halleyn karo ee hawo cufan si loo abuuro xarago iyo dhaqdhaqaaq wareeg ah. Dhowr naqshado kala duwan ayaa la heli karaa. Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta matoorka pneumatic halkan waxaanan ku siin karnaa mootada hawada ugu waxtarka badan, 10 hp matoorka pneumatic ama
am425 matoorka hawada, ama xitaa matoorka hawo.
Sidee bay ku shaqeeyaan matoorka hawadu?
Waxqabadka matoorka hawada waxay kuxirantahay cadaadiska gudaha. Cadaadis gudaha ah oo joogto ah, matoorrada hawada ayaa muujinaya astaamaha soosaarka toosan / xiriirka xawaaraha. Si kastaba ha noqotee, adoo si fudud u nidaaminaya sahayda hawada, adoo adeegsanaya farsamooyinka tabaha ama xakamaynta cadaadiska, wax soo saarka matoorka hawada si fudud ayaa loo beddeli karaa.
Waa maxay macnaha hawo-mareenka hawada ee nidaamka sambabaha?
Gawaarida neefsashadu waxay ku guuleysataa wax qabadkeeda kor u qaadista waxayna sii dheereysaa nolosha qaybaha ku shaqada leh nidaamka pneumatic marka ay u shaqeyneyso sida ugu dhow ee ugu macquulsan xawaaraha la qiimeeyay (50% ee xawaaraha caajiska ah). Isku dheelitirka tamarta ayaa ugu fiican aaggan, sababtoo ah hawo isku buuqsan ayaa loo isticmaalaa si hufan.
Moodalkani ma pistons baa? Sure, moodooyinkayaga caadiga ah waxay wataan bastoolado. ma sameysaa moodooyin kale oo matoorro hawadeed ah? tusaale ahaan la soo qaado halkii pistons?
Haa, tan waa la cusbooneysiin karaa iyadoo la adeegsanayo muraayadaha muusiga ama piston-ka ee leh hoos u dhac ku yimaada xawaaraha mashiinka weyn.
Qeexidda matoorka ee sambabaha
Gawaarida la isticmaalayo waa in lagu xushaa iyadoo lagu bilaabayo torque loo baahan yahay xawaare cayiman. Si kale haddii loo dhigo, si aad u doorato gawaarida saxda ah, waa inaad ogaataa xawaaraha iyo torque-ga loo baahan yahay. Maaddaama awoodda ugu badan la gaarey kala badh xawaaraha bilaashka ah ee gawaarida, waa in la doortaa matoorka si ujeedada loogu talagalay ay ugu dhowdahay awooda ugu badan ee matoorka.